...there was no room for them (Joseph and Mary) in the inn...
~Luke 2: 7b
(( Kill all children below two years of age! ))
((( Yes... Sir.... )))
What has JESUS got to do with me?
H A P P Y - N E W -Y E A R
Posted by Tesla at 9:50 AM |
Just Frequency (Through The Space)
To Listening Music From Radio.....
No Physical Attach..
Just Mental Energy (Through The Space)
To Rebirth for New Life.....
Be Prepared For Broadcast.......
Posted by Tesla at 8:17 AM |
Oh.. My Pause!
Elephants 's Legs R There...........
Posted by Tesla at 7:52 AM |
တနေကုန် စုံချည်ဆန်ချည် လှုပ်ကြနေ..
ငါ. လေ. ရှေ့ဆက်ရမဲ့. မနက်ဖြန်.. အား. အသစ်… ရချင်သေး…။
ကိုယ်တတ်စွမ်းသလောက် အလင်းရောင် အနွေးဓါတ် ပေးခဲ့တယ်…။
ရွှေ.. ငွေ နဲ့ ဂုဏ်သိမ်ဒြပ်တို့..
မရှိ လည်း. နေနိုင်ပါတယ် တသက်လုံး.
အလိုအပ်ဆုံးက ဘ၀ကို အရိုးသားဆုံး နေဘို့..။
နာရီစက္ကန့်.. များက ရှားပါးလွန်းတယ် ကိုယ့်ဘ၀ကို စိတ်ကြိုက်နေလိုက်…
ရိုးစင်းလွန်းတဲ့ ဘ၀က အကောင်းဆုံးမို့….။
ညက ကိုမျက်လုံးကို Online တွေ့တော့ ကိုမျက်လုံးရေ.. မရိုမသေ.. မြန်မာတစ်ပုလင်းလောက် Attached လုပ်ပြီး ပို့.. စမ်းပါဗျာ..။ ဆိုတော့.. မြန်မာဘီယာက အရောင်းပျိုဖြူမလေးတွေလိုပဲ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ . ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ခဏလေးစောင့် ဆိုပြီး MyanmarBeer ကို ရသေ့စိတ်ဖြေ ဆိုပြီး ပေးတာ..။ အဲ့ဒီမှာ.. အပေါ်က မျိုးကြီး သီချင်းလေးကို သွားတွေ့တယ်.။ တစွန်းတစ ကြားဘူးနေပေမဲ့ သေသေချာချာ နားမထောင်ဘူးသေးဘူး.။ ညကတော့ အလွှမ်းတွေ ထပ်ပေါင်းပြီး ခံစားချက်ကြီးနဲ့ နားထောင်မိတော့. အလာလာ.. ခိုက်သည်.. ပေါ့.။
“ နေရောင်ခြည်.. မဟုတ်လည်းပဲ..
ကြယ်စင်လောက်တော့ ငါ့ရဲ့လက်တကမ်းတွေ့.. “
အဲ့.. နေရာကတော့ အကြွှေဆုံးပဲ.။ ရေးတဲ့သူက ဘယ်သူလည်းတော့ မသိပါဘူး.။ မြန်မာဘီယာ ရဲ့ Marketerတို့ကလည်း တော်ရှာပါပေတယ်..။ ဘီယာသမားတွေရဲ့ အသည်းနှလုံး ကို ဘယ်လိုညို့ယူရမယ် ဆိုတာသိတယ်..။ သီချင်းလေး နားထောင် ချင်ရင်တော့ အဲ့ဆိုဒ် မှာရှိပါတယ်..။ ဒါတင်ပဲလား… ဆိုတော့လည်း.. မကသေးဗျ… ပိုစတာလေးတွေလည်း ရှိသေးတာ. ကျနော်ကတော့.. အဲ့ဒီ ပိုစတာ ကို စိုက်ပြီး တွေတွေကြီး ထိုင်ကြည့်နေတာ မျက်တောင်မခတ်မိတာ ငါးမိနစ်လောက်ထင်တာပဲ..။ ဟီး.။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. လွှမ်းလို့ပါ မြန်မာဘီယာ.. ရယ်.။
အလိုအပ်ဆုံးက ဘ၀ကို အရိုးသားဆုံး နေဘို့..
Posted by Tesla at 12:35 PM |
Posted by Tesla at 2:16 PM |
ဘုရားသခင်ဟာ အမြဲတမ်း အေးခဲနေတဲ့
ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခု ဖန်တီးပေးထားခဲ့တယ်..။
မွေးကထဲက သေတဲ့အထိ ရေလုံးဝသောက်စရာမလိုပဲ
အသက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ ကန္တာရသမင် တကောင်ကို
လေမရှုတတ်တဲ့ ငါးတွေအတွက် ရေထဲမှာပဲ ကြီးပြင်းဘို့
ငါးမျှားချိတ်ရယ် တူမီးတလက်ရယ် အစွယ်တငေါငေါရယ်
ဒီဟာရယ် ဟိုဟာရယ် နဲ့ စုံလင်လှစွာပဲ အရှုပ်ထွေးဆုံးသော
ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခု မှာ နေထိုင်စေလို့ လူဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ
ဒါပေမဲ့ လူတွေက တော်တယ်တဲ့..
ီပိုလာဝက်ဝံကို အီကွေတာရာသီဥတု ရဲ့ တိရိစ္ဆာန် ရုံ တစ်ခုထဲမှာ
သူတို့ကိုတိုင်လည်း အောက်ဆီဂျင် ပိုက်တွေ တပ်ဆင်ပြီး
ဧည့်ခန်းထဲမှာ အလှဆင်ထားတဲ့ ရေထည့်သေတ္တာထဲက
အဲ့ဒီလူတွေက အားမရဘူးတဲ့ ထပ်တော်တယ်..
ပင်လယ် ကမ်းစပ်ရဲ့ ကမ်းပါးပေါ် မှာ လူတယောက်ဟာ
နေထွက်ရာ အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး လက်နှစ်ဘက် ကို ဘေးသို့ ဆန့်တန်းတယ်.
အဲ့ဒါ အရှေ့အရပ် ဖြစ်တယ်လို့ အော်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာတဲ့
ကမ္ဘာကြီးပေါ် မှာ မတ်မတ်ရပ်နေတယ် လို့ သူထင်တဲ့
သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကမ္ဘာ့ ၀င်ရိုးတန်းအပေါ်ကနေ
နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်း ဒီဂရီ
တိမ်းဆောင်းနေသေးတယ် ဆိုတာကိုတော့ သူမေ့နေတယ်တဲ့..။
Posted by Tesla at 12:20 PM |
ကထ္တီပါဖြူ အခါတရာ ထပ်ခင်းထားသော
ဇမ္ပူဒီပါ လက်ယာတောင်ကျွှန်း အမြင့်ဆီက.
တကွဲစီ ကြယ်စင်တွေ လွင့်ထွက်သွားခဲ့အောင်
မဉ္ဖူသကမြချပ်ရံကို ရွှေတံချူ လက်တော်စွဲလို့
ဆွတ်မြဲယူမြဲ ရံဖန်ခါ ကစားတော်မူနေတုန်း
ခိုးခိုးခစ် ရီသံ အဆုံးမှာတော့
မဉ္ဖူသက နတ်ပန်းကို ငြီးငွေ့တော်မူ.
ချော့မြူကာ ဆော့ယူ ကစားချင်တယ် ဆိုလို့.
နေထိမရ လစန္ဒာ ၀င်းဝင်းပအသားရယ်မို့..
ရံခြွေတော် တစ်ရာအပေါင်းတို့က ထီးမိုးကာ ပို့..။
ရွှေရွက်ထီးခြင်း အစပ်မှာ နဘေထပ်မညီပဲ
ဆီးရွက်ခန့် နေခြည်ပြောက်က စော်ကားစွာ ထိုးဖောက်
ထိပ်ထားရဲ့ နားသည်စပေါ် ကျရောက်တော့..
ရွှေအသားတော် ၀ါဝါ၀င်းက သွေးပင့်ကူမျှင် ယှက်သန်းလို့
ကြာဝတ်မှုန် ပွင့်ချပ်ကိုမှ နေစွတ်ယူဖြန်းသလိုရယ်နဲ့
မျက်နှာတော် ပေါ်က စို့တွဲစု ချွှေးရည်ဥ လေးတွေကို
မှဲ့သလို ၀င်းသလို ဖြစ်နေတဲ့
နှင်းရည်စို စွတ်စွတ်လေးတွေ ရယ်သို့
မျက်နှာကျက်ဆီက လိပ်ပြာအတောင်ပံ တဖြတ်ဖြတ်ကြောင့်
ထိပ်ထားရယ်က ချမ်းရှာတော် မူသတဲ့လေ..။
တိမ်ညွန့်ကိုယ်ကျပ်အကျီင်္ရဲ့ စိန်စီသော အရပ်နဲ့ .
ဖြတ်ခနဲ အဟ အမှားမှာ..
ခပ်မို့မို့် ရတနာ နှစ်ပါးရယ်က
တ၀က်ခန့် လစ်သည်ကို မြင်ရတော့..
အာကာဘုံနတ်နန်းက လျှပ်ပန်းနွယ် အချင်းချင်း
တရွှမ်းရွှမ်း ကြမ်းကြမ်းတန်း ခွပ်လူးလိုက်တုန်း..
သောက်ရှုးကြယ် နှစ်ပွင့် ထင်းခနဲ ၀င်လင်းလိုက်သလိုမျိုး.
နှလုံးသွေးတဖြန်းဖြန်း ကွန့်မြူး တာရယ်ကြောင့်
ရူး.. ရော.. တဲ့.။
ဖိတ်ကျလာတဲ့ ဆဌမမြောက်အာရုံ တွေရဲ့ အားနဲ့..
ရတနာကြေးမုံ နန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီး ဖတ်ပြီးတော့ ဒီကဗျာလေးကို ရေးဖြစ်တယ်.။ တချို့ အချက်အလက်နဲ့ စကားလုံးတွေက အဲ့ထဲကစာသားတချို့ကို ဆင့်ပွား တွေးထားတာပါ.။ အလောင်းမင်းတရား ကြီး ခံစားတဲ့ အနုပညာကလည်း ခေဘူးဗျ.။ မဖတ်ဘူးသေးရင် ဖတ်ကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်.. တရုတ်ပြည်က ကျော်ကြားလှတဲ့ အော်ပရာတွေ လောက်တော့ အဲ့ဇာတ်တော် ကိုရေးတဲ့ ရွှေတောင်သီဟသူ တို့ကအပျော့ပေါ့.။ :)
Posted by Tesla at 2:46 PM |